Saturday September 05, 2020 - 18:22:20 in Wararka by Mogadishu Times
Markii ugu horreysay oo ay abuureen 2013 Taliska Mareykanka ee Afrika, cutubkan waxaa loo xilsaaray sameynta isku-duwidda Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka. Waxay ku taalaa Xarunta Caalamiga ah e
Markii ugu horreysay oo ay abuureen 2013 Taliska Mareykanka ee Afrika, cutubkan waxaa loo xilsaaray sameynta isku-duwidda Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka. Waxay ku taalaa Xarunta Caalamiga ah ee dhinaca badda ee Muqdisho, Unugga Isku-xirka Milatariga Mareykanka (MCC) wuxuu door weyn ka ciyaaraa hoggaaminta dadaallada bulshada caalamka ee lagu xoojinayo amniga Soomaaliya. Markii ugu horreysay waxaa abuuray Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) oo ka kooban seddex qof oo loo xilsaaray sameynta xiriirinta Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka, MCC waxay aragtay in howlaheeda la ballaariyay ka dib shirkii London ee arrimaha Soomaaliya ee 2017. markii xoghayihii gaashaan dhigga ee Mareykanka James Mattis uu ogolaaday in Mareykanku uu hogaamin doono Habka Dhameystiran ee Amniga Strand 2A (CAS 2A). Habka Dhameystiran ee Amniga ayaa ah qaab lagu fuliyo ballanqaadyada caalamiga ah ee ka hooseeya shanta qaybood ee shaqada: in la suurogeliyo hawlgallada wax ku oolka ah ee AMISOM iyo u gudubka amniga ay hoggaamiso Soomaaliya; horumarinta hay'adaha amniga qaranka Soomaaliyeed; taageeridda qorshayaasha xasilinta dowladda Soomaaliya iyo soo kabashada bulshada / maamulka dowladda; ka hortagga iyo ka hortagga xag-jirnimada rabshadaha wata; iyo kor u qaadista taageerada la-hawlgalayaasha caalamiga ah. Strand 2A wuxuu si gaar ah ula jeedaa Wasaaradda Difaaca ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed. "MCC waxay u shaqeysaa Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya dhismaha Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed," ayuu yiri Col Eric Hefner, oo ah agaasimaha MCC (laga bilaabo Sebtember 2020). nidaamka CAS 2A. Maaddaama ay tahay 'unug isku xiran' bulshada caalamka, MCC waxay bixisaa isku-dubaridka dadaallada caalamiga ah ee badan si loo dhiso XDS. " Laga bilaabo Sebtember 2020 MCC waxaa ka mid ah Kooxda Kaalmada Milatariga – Soomaaliya (MAG-S), Xafiiska Iskaashiga Amniga (OSC), iyo laba sarkaal oo Ingiriis ah ayaa lagu taageeray Howlgalka Tangham, howlgalka UK ee Soomaaliya.
"MAG-S waa qaybta si toos ah ugu warbixisa Hawl-gallada Gaarka ah ee Hawlgallada Gaarka ah – Soomaaliya (JSOTF-SOM),” ayuu yiri Lt. Cmdr. Jason Looper, sarkaalka qorshaynta MCC (laga bilaabo Sebtember 2020). dhismaha, oo ay kaalin weyn ka ciyaaraan OSC iyo labadeenna sarkaal ee UK ah, ayaa muhiim u ah mustaqbalka kala-guurka Soomaaliya.
Waqtigaan la joogo saraakiisha Ingiriiska, labadaba gaashaanle dhexe, waxay u shaqeeyaan sidii qorsheeyeyaal dagaal oo dhul ah si ay u siiso MCC awood aan si kale u lahayn.
Markii ay MCC ka korortay seddex shaqaale illaa 20, Isku-dhafka Isku-dhafka Isku-dhafka – Geeska Afrika (CJTF-HOA) wuxuu noqday bixiyaha ugu weyn ee bixiya taageerada boosaska aan lagu darin amarkii hore ee AFRICOM ee lagu aasaasay qolka. Tirada shaqaalaha ee kordhay waxay muujisay inay muhiim tahay ilaalinta xiriirka iyo masuuliyadaha ay MCC qaadatay, waxayna sare uqaaday saameynta ay AFRICOM ku dooneyso Soomaaliya iyadoo taageero siineysa AMISOM, SNA, iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah ee ka howlgala Bariga Afrika. Qaran.
Joseph Truesdale, oo ah hogaamiyaha keydka badda ee MAG-S (laga bilaabo Sebtember 2020), wuxuu xusay in bulshada caalamka ee Soomaaliya ay u shaqeyso sidii is-bahaysi, inkasta oo aysan lahayn wax badan oo ka mid ah qaabab rasmi ah oo lagu yaqaan tiyaatarada kale ee militariga.
La’aanta isbahaysiga rasmiga ah ayaa ah waxa ka dhigaya jawiga shaqada mid "xiiso leh oo dhib badan,” sida uu qabo Looper. "Qof kastaa wuu isu yimaadaa iskuna duwo dadaaladiisa si Soomaaliya loogu hormariyo nabadgalyada waarta.”
In kasta oo uusan jirin heshiis cayiman oo ah in la is caawiyo, haddana xoogagga kala duwan ee caalamiga ah waxay ka shaqeeyaan hal ujeedo guud oo midba midka kale wuu taageeraa markii isku dhacyada qorshayntu ay yimaadaan.
"Markii fadhiyadayada qorshayntu ay aqoonsanayaan baahiyaha muhiimka ah, la-hawlgalayaal badan oo caalami ah ayaa keena qalab iyo barnaamijyo tababar oo gaar ah si loo buuxiyo baahiyahaas,” ayuu yiri Looper. In la abuuri karo is afgarad ku saabsan mudnaanta arrimaha xasilinta iyo in lala yeesho wada-hawlgalayaasha caalamiga ah fulinta qaybaha kala duwan ee qorshahaas si wada jir ah ayaa muhiim u ah guusha Soomaaliya.
"Isku-duwidda wax ku oolka ah waxay muhiim u tahay Soomaaliya si ay u gaarto ujeeddooyinkeeda istiraatiijiyadeed ee dib-u-habeynta iyadoo lala dagaallamayo aagga ka dhanka ah al-Shabaab,” ayuu yiri Truesdale, isagoo intaas ku daray in MCC ay la shaqeyneyso wada-hawlgalayaasha kala duwan ee caalamiga ah si ay xiriir dhow ula yeeshaan saraakiisha sare ee ka tirsan Ciidamada XDS. iyo saraakiisha sarsare ee amniga federaalka.
Hefner wuxuu ku tilmaamay waxtarka Midowga Yurub (EU) mid muhiim u ah Soomaaliya maxaa yeelay Midowga Yurub wuxuu maalgeliyaa AMISOM, oo iyaduna, siisa awood dagaal oo lagu taageerayo Dowladda Federaalka Soomaaliya. AMISOM waa "ciidan karti iyo karti leh oo isbadal muuqda ku sameeya joojinta al-Shabaab iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda Dowladda Federaalka Soomaaliya.”
"Iyada oo laga soo qaatay wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya guud ahaan Bariga iyo Bartamaha Afrika, askarta AMISOM waxaa lagu dhiiri galiyay in ay u shaqeeyaan magaca dadka Soomaaliyeed, umadahooda, iyo beesha caalamka,” ayuu yiri Truesdale.
Kooxda howlaha dowladaha Turkiga ee saldhiggoodu yahay xerada TURKSOM waxay bixiyaan maaliyad iyo tababaro muhiim ah, Howlgalka Tababbarka Yurub – Soomaaliya (EUTM-S) waa lamaane qiimo badan maxaa yeelay waxay siisaa awood badan oo tababar bulshada caalamka ah waxayna leedahay awood dagaal oo ay ku caawiso ciidanka XDS. Hefner wuxuu kaloo soo qaatay "xiriirka gaarka ah” ee ka dhexeeya Mareykanka iyo UK, asaga oo sheegay inuu si aad ah ula shaqeeyo taliyaha ciidanka UK, isagoo la wadaagaya macluumaadka iyo fikradaha.
"Tan ugu muhiimsan waa iskaashiga iyo wada shaqeynta qeybaha kala duwan ee halkan ka jira si loo caawiyo ciidanka XDS. Dhammaanteen waxaan leenahay digtooni iyo hawlgallo u gaar ah, laakiin qof kastaa wuxuu u shaqeeyaa si uu isugu waafajiyo dadaalladaas maxaa yeelay dhammaanteen waxaan u aragnaa inay tahay sida ugu wanaagsan ee looga faa’iideysan karo dadaalkeenna, ”ayuu yiri Hefner. Wuxuu intaas ku daray in wada-hawlgalayaasha caalamiga ahi aysan kaalmo ka raadinaynin Mareykanka, laakiin ay isku-duwidda.
MAG-S wuxuu isku dubaridaa howlgalada iyo waxqabadyada abaanduulaha ciidamada difaaca ee XDS iyo ciidamada AMISOM oo qeyb ka ah horumarinta awooda ciidanka XDS ay ku fulin karaan howlgalada isku dhafan. Isku-dubbaridka iyo hagida geedi socodka dib-u-habeynta XDS ee lagu taageerayo Safaaradda Mareykanka wuxuu isku xirayaa Ciidamada XDS, Shaqaalaha Guud ee Soomaaliya, iyo Wasaaradda Difaaca si wada jir ah, taas oo xoojineysa kormeerka rayidka ee millatariga, dejinta nidaamyada isla xisaabtanka, iyo kobcinta xirfadleyda Ciidamada XDS.
Marka laga hadlayo isdhexgalka dhow ee aan la leenahay hogaamiyayaasheeda, waxaan si aad ah ula dhacsanahay howlgalada firfircoon ee Danab ee ka dhanka ah cadowgeenna guud, ee al-Shabaab, iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay in ay wax uga qabato dadaallada aan hawlgalka ahayn ee muhiimka ah, sida dhisidda awoodda abaabul. ayuu yiri Truesdale, isagoo xusay in saraakiil badan oo ka tirsan Danab ay ka yar yihiin dhiggooda Mareykanka isla markaana saraakiisha Soomaalida "ay qaadaan xilal adag oo xagga hoggaaminta ah oo aan inta badan laga fileynin saraakiisha reer galbeedka marxaladaha ugu horreeya ee milaterigooda milatari.
Sheekooyinkooda shakhsiyadeed ee geesinimada iyo dadaalka leh ayaa si gaar ah u soo jiitay iyadoo la tixgelinayo xaaladaha hawlgalka adag ee Soomaaliya iyo mustaqbalkeeda aan la hubin. ”
"Waxaan ka mahadcelineynaa talooyinka, gargaarka, iyo tababarada ay bixiyeen xoogaga iskaashiga la leh Mareykanka si ay xirfad ugu yeeshaan guutada lugta ee Danab light, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya,” ayuu yiri 1-da Lt. Maxamuud, oo ah sarkaal ka tirsan Danab oo si joogto ah ula shaqeeya MAG-S. "Waxaan wadaagnaa hadaf guud oo ah inaan la dagaalano ururada xagjirka ah ee xagjirka ah ee ka jira Soomaaliya iyo Bariga Afrika si loo helo amni iyo badbaado muwaadiniinteena.”
"Ma jiraan wax xal ah oo ka baxsan sanduuqa,” ayuu yiri Looper. "Horumarku wuu socdaa, laakiin sababta oo ah waxaan dhiseynaa aasaaskooda, ma ahan oo keliya hagaajinta waxa jira, waa inaan yeelannaa dulqaad istiraatiijiyad leh si aan u fahamno xawaaraha horumarkaas.”
Waxaan heystey mudnaan ah in aan hogaamiyo koox xirfadlayaal ah oo isbadaleysa had iyo goor kuwaas oo ku dabaqaya caqligooda, khibradooda, kana shaqeynaya hormarinta hadafkeena ah ‘dhisida XDS,’ ayuu yiri Hefner. si ‘loo abaabulo, loo tababaro, loona diyaariyo ciidamada XDS.